Üretimin Geleceğini Şekillendiren Zirveleri7Bin Personel Ziyaret Etti | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်7 ထောင်နှင့်ချီသော ၀ န်ထမ်းများသည်အနာဂတ်အတွက်ထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်သည့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့သွားရောက်ခဲ့သည်
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, Marmara ဒေသကြီး, Advertising ကြော်ငြာ (Advertorial), တူရကီ 0
စက်ရုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0 လျှောက်လွှာများထိပ်သီးအစည်းအဝေး 1-3 အောက်တိုဘာ 2019 ရက်စွဲများကိုYeşilköy Istanbul တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က 10 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခြင်းနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို 7.064 လူများကလာရောက်ကြည့်ရှုသည်။
စက်မှုမီဒီယာသည်အဓိကအားဖြင့်ယခုနှစ်အတွင်းထုတ်ဝေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ 'ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အစီအစဉ်' ရှိသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖော်ပြသည်။ ထို့နောက်ကဏ္ each တစ်ခုစီသည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဖက်ရှင်ဆိုင်များကိုကျင်းပကြသည်။ ၎င်းသည်သက်ဆိုင်မှုမရှိသော visitors ည့်သည်များအတွက်အလားအလာကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေပြီးပြသသူများအားသက်ဆိုင်ရာ visitors ည့်သည်များနှင့်အချိန် ပို၍ ကုန်စေသည်။ ဤစနစ်ဖြင့်ယခုနှစ်တွင်ငါးကြိမ်မြောက်ကျင်းပသော Robot Investments and Industry 4.0 Applications Summit သည်စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်အမြောက်အများကိုထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ 2018 မှလူများသည်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပြုလုပ်လိုသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်လမ်းညွှန်ဖြစ်သောအဖွဲ့အစည်းသို့လာရောက်လည်ပတ်စဉ် 6.411 တွင်ယခုနှစ် visitors ည့်သည်အရေအတွက် 7.064 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
panel ကိုစိတ်ဝင်စားမှု SUMMIT ကာလအတွင်းအလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်ခဲ့သည်
ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏အတိုင်းအတာအတွင်းသဘောပေါက်သည့်ပြား၌၎င်း, ကုန်ပစ္စည်းဖြူ၊ အစားအစာ၊ အစားအစာ၊ အဖျော်ယမကာ၊ ဆေးဝါး၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသောကဏ္inများအတွက်စက်ရုပ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ကဏ္fromမှကျွမ်းကျင်သူများကဟောပြောသူများအဖြစ်ပါ ၀ င်သည့်ဆွေးနွေးပွဲများတွင်လျှောက်လွှာများနှင့်ကဏ္experiencesအလိုက်အတွေ့အကြုံများအားလုံးကိုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အဖွဲ့များသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသောပရိသတ်များသည်ဟောပြောသူများအားသူတို့၏သိလိုစိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ အထူးအာရုံစိုက်မှုကိုခံရသည့်အုပ်စုများတွင်ကဏ္applicationsအလိုက်အသုံးချမှုများနှင့်ကုမ္ပဏီများကသူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အညီပြုလုပ်သောအစုရှယ်ယာများသည်ကဏ္ each တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာသည်။
အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံခြားစက်မှုလုပ်ငန်းဒီနည်းကို SUMMIT မှာတွေ့ဆုံ
Robot ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ 4.0 Applications Summit and Exhibition သည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကိုစုစည်းထားသည်။ အဖွဲ့အစည်း B2B များ၏အခြေအနေတွင်ရာအရပျကိုယူကြောင်းပို့ကုန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး, အပါဝင်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်များ purchasing စက်ရုံစက်ရုပ်များနှင့်စက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတူတူလာမဝယ်တူရကီနှင့်အတူစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ရုရှား၊ အီဂျစ်၊ အီရန်၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘယ်လာရုစ်နှင့်ယူကရိန်း၊ ညှိနှိုင်းမှုကာလအတွင်းမော်တော်ယာဉ်၊ အဖြူကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးစက်ယန္တရားများ၊ လယ်ထွန်စက်များ၊ တင့်ကားများ၊ မော်တော်ယာဉ်ထရပ်ကားများထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံကြီးများ၏ခွင့်ပြုချက်ရသူများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်အသစ်များများစွာစတင်ခဲ့သည်။
စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြိုးပမ်းနေသောကုမ္ပဏီများကိုပေါင်းစည်းထားသည့် Robot Investments Summit နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0 Applications Summit တို့၏ကဏ္ sector ဆိုင်ရာမဟုတ်သော visit ည့်သည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်ယခုနှစ်တွင်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ the ည့်သည်များ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်
အနာဂတ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏ရထားလမ်းစနစ်များပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုအပေါ် 05 / 02 / 2012 ရထားလမ်းစနစ်များအတွင်းပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သောနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ - ရထားစနစ်တွင်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု၏အနာဂတ်ဆွေးနွေးပွဲကို Konya စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း (KSO) နှင့်ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်အသင်း (RAYDER) တို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ KSO Kurulu ဒုဥက္ကPresident္ဌ
Samulaş '' တိုးမြှင်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုသည်ဂရိတ် Leap 15 / 03 / 2018 Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်က Yusuf Ziya Yilmaz "ကျနော်တို့ကကလေးရဲ့မျက်စိသို့တူရကီရောက်စေဖို့ Samsun'u ကြှနျတျောတို့၏ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ ဆမ်ဆန်မြို့တော်ဝန် Yusuf Ziya Yılmaz၊ POELSAN ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းဒါရိုက်တာYönetim
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား, ကြမ်းပြင်မှအဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်မှု Center က teknosab ပါဝါ 20 / 07 / 2018 BTSO ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကChairman္ဌCüneytŞenerကတည်ဆောက်နေသော Ankara-Bursa မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာနှင့်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပြီး TEKNOSAB အားဤအားကောင်းသောနှင့်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကွန်ယက်သို့ပေါင်းစည်းသွားမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ရထားလမ်း၏အနာဂတ်မှာရှာဖွေနေနိုင်ငံများ 21 / 09 / 2012 Fuarın ortasında anıt gibi yükselen lokomotifi gösterdi, "Bu da bizim eserimiz." dedi. Hikâyesini anlattı sonra. Tek başımıza yapmıyoruz tabii. TÜLOMSAŞ-GE ortak yapımı. Elektrikli. GE dünyada söz sahibi bir Amerikan firması.…
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ် bursa Sahin ပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်ပါလိမ့်မယ် 12 / 12 / 2013 Şahinသည် Bursa ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာအနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပုံနှိပ်လိမ့်မည် - "Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဟာစီမံကိန်းအပေါ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်မရှင်၏အစီရင်ခံစာကိုတညီတညွတ်တည်းလက်ခံခြင်း ... "
Samulaş '' တိုးမြှင်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုသည်ဂရိတ် Leap
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းရထား, ကြမ်းပြင်မှအဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်မှု Center က teknosab ပါဝါ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ် bursa Sahin ပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများနှင့်ရထားလမ်း Trabzon 50 နောက်နှစ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas: "ပို့ဆောင်ရေး၏အနာဂတ်အပေါ် Bursa ဖို့ကျနော်တို့စီစဉ်"
ကျနော်တို့ Izmir ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနာဂတ်ပြောဆိုသော
Koçbay, Botanica သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ထမ်းများ, ကျောင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှစစ်ဌာနချုပ်လည်ပတ်ခဲ့